Coral, nnukwu ihe mgbochi nke abụọ na ụwa nọ na Belize | Akụkọ Njem
Corals, nnukwu ihe mgbochi nke abụọ n'ụwa bụ na Belize
Njem njem | | America, Belize, Ecotourism, General
Rals na coral na-amasị gị? Naanị ụnyaahụ anyị na-ekwu okwu banyere coral coef kachasị ukwuu n'ụwa, nke a pụrụ ịhụ ọbụna site na mbara igwe na nke ahụ bụ ihe kachasị ukwuu na mbara ụwa: the Nnukwu Ihe Mgbochi nke Australia. Ọfọn, ọ bụghị naanị ya na ọfụma na ị gaghị aga ebe ahụ ka ị nwee ike banye n'etiti coral dị mma. Uzo nke abuo kachasi elu n ’uwa, n’usoro, bu Nnukwu Ihe Mgbochi nke Belize.
Belize bụ steeti Caribbean na ihe mgbochi a adịworị Ihe Nketa Worldwa dika nwanne ya nwanyi tọrọ. Ọ dị kilomita dị iche site na kọntinent kọntinent nke na mgbe ụfọdụ nzuzo nzuzo dị ezigbo nso na ndị ọzọ na-aga n'ihu ma chọọ njem ụgbọ mmiri. N'etiti mita 40 na 300, karịa ma ọ bụ obere. Belize Barrier Reef dị ihe dị ka kilomita 300 n’ogologo ma bụrụ ebe obibi ọtụtụ narị ụdị mmiri mmiri. E kwuwerị, ọ bụ ihe e kere eke na mbara igwe yabụ na e nwere coral nke ụdị dị iche iche, azụ na ụmụ anụmanụ.
Kindsdị ebe ndị a pụrụ iche chọrọ nlekọta gị. Cheedị na n'oge colonial, mgbe ụgbọ mmiri na-abịa ma na-agagharị na Caribbean bụ mpaghara a na-agakarị, ọ dịghị onye chọrọ ịma banyere ịdị ndụ nke ihe ịtụnanya a. Luckily taa, anyị bụ ndị ọzọ na gburugburu ebe obibi maara na ebe a na-echebe ọtụtụ ebe okike. N'ọnọdụ ọ bụla, ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri na-ebute mmetọ ha mana ọ gaghị ekwe omume igbochi njem nleta pụọ ​​n'ebe a mara mma. Ọ dịghị onye chọrọ ịkwụsị igwu mmiri na ama Oghere Blue ma ọ bụ kwụpụ na ndị dị ebube ọcha ájá igodo ebe ị na-eche na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Belize » Corals, nnukwu ihe mgbochi nke abụọ n'ụwa bụ na Belize
Aka aka nke Mar Menor
Osimiri isii kacha mma na India